सुत्नु पहिले अनुहारमा नरिवल तेल लगाउँदा यति धेरै फाईदा जानिराखौ । – Sandesh Press
July 10, 2021 282
धेरैलाई नरिवल खाने फाइदाहरू थाहा हुन्छ, तर यसलाई प्रयोग गर्दा त्यहाँ धेरै फाइदाहरू छन्। नरिवलको तेल कपालको बलको लागि प्रत्येक घरमा प्रयोग गरिन्छ। तर के तपाईंलाई थाहा छ यसलाई अनुहारमा लगाउनाले धेरै फाइदाहरू हुन्छन्।आज सबैजना कुनै न कुनै प्रकारको छाला समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्। विशेष गरी महिला, केटीहरू दाना, झिम्का, सुख्खापन र दागले डराउँछन्। यसको पछाडिको
कारण निन्द्राको अभाव, मोबाइल चलाउँदै ढिलो सम्म, रासायनिक उत्पादनहरू प्रयोग गरेर सही भोजन नहुनु हो। व्यक्तिहरू सौन्दर्य उत्पादनहरूमा हजारौं रूपैयाँ खर्च गर्छन् पिम्पल्सबाट छुटकारा पाउन र चमकदार छाला प्राप्त गर्न। तर अझै परिणामले केहि विशेष प्राप्त गर्दैन। यस्तो अवस्थामा हामी तपाईंलाई एउटा घरेलु उपचार बताउने छौं, जुन सहायताले तपाईं छाला सम्बन्धी सबै समस्याहरूबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ।
Prevकपाल झरेर हैरान भयो ? उसोभए घरमा यी ३ चिज मिसाएर बनाउनुहोस् नेचुरल स्याम्पु !
Nextनेपालमा टिकटक बन्द हुने !